Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Ubuntu One | Ubunlog
Joaquin Garcia | | Tutorials, Ubuntu, Ubuntu Phone
Na ny Ubuntu na ny Canonical amin'izao fotoana izao dia tsy manana serivisy mailaka mahery, na manana fivarotana antsinjarany lehibe, na koa manana tsena finday avo lenta smartphone na finday.
Noho izany, efa elaela izay Ubuntu dia namorona serivisy antsoina hoe Ubuntu One. Tamin'ny voalohany dia teraka ho toy ny kapila mafy virtoaly ao amin'ny Cloud izay nifaninana tamin'ny iCloud sy Dropbox izy, saingy nandao ilay tetikasa i Canonical ary navelany nijanona teo. Na izany aza, mahaliana ny mahafantatra ny fomba fananganana kaonty amin'ity serivisy Canonical ity.
1 Fa maninona Ubuntu One?
2 Mamorona kaonty Ubuntu One
Fa maninona Ubuntu One?
Maro aminareo no hilaza amiko hoe maninona no manao kaonty amin'ny serivisy maty satria ny Ubuntu One dia tsy manana rindrambaiko kapila matevina. Tsotra, ny antony, satria miasa amin'ny kaonty orinasa Ubuntu izy izao. Ho anao izay nanandrana ny Ubuntu Touch dia efa fantatrao izany ny Ubuntu Touch App Store dia tantanana miaraka amin'ny kaonty Ubuntu One, saingy mety ho ny fiandrasantsika ny fahatongavan'ny finday avo lenta ary te hisoratra anarana amin'ny alàlan'ny solosaina isika, mety ho te hanana kaonty hividianana rindranasa avy amin'ny Ubuntu Software Center, sns ... Ahoana no ahitanao, Ubuntu One dia mbola manana asa maro ary ilaina ny fahalalana azy.
Mamorona kaonty Ubuntu One
Ny dingana voalohany dia ny mankany amin'ny tranokala ofisialiny, ny adiresy dia izany ary hahita pejy toy izao ianao:
Raha vantany vao feno ny tranokala, dia mankany amin'ny ankavanana ambony ianao ary kitiho ny safidy «Midira na mamorona kaonty vaovao»Aorian'izay dia hiseho ny efijery fidirana. Aza matahotra fa tsy maintsy asio marika ny safidy voalohany milaza hoe «Mpampiasa Ubuntu One vaovao aho»Ary avy eo hiseho ny efijery fisoratana anarana nentim-paharazana, saingy tsy dia nentin-drazana loatra.
Amin'ny lafiny iray dia mila adiresy mailaka, anarana ary teny miafina fotsiny isika fa tsy maintsy averintsika ho an'ny filaminana. Hampiasaina koa ilay mailaka handefasana mailaka fanamarinana kaonty.
Amin'izany dia hamboarina ny kaonty ary vonona handeha. Tsy mila fampahalalana bebe kokoa ianao ary aza adino ny manamarina ny mailaka fanamarinana. Rehefa vita ny zava-drehetra, ny zavatra tsara indrindra tokony hataonao dia ny misoratra anarana ao amin'ny Ivon-toeran'ny Software Ubuntu, mety ho tsotra be izany, miaraka amin'ny kaonty noforonina ho an'ny Ubuntu One, handeha ianao File -> Ampifanaraho ny solosaina ary hangataka ny kaonty izy, ka ny kaonty no hisoratra anarana ny fitaovana ary hampifanarahina amin'ny finday smartphone Ubuntu Touch izay marihinay. Araka ny hitanao, ny zava-drehetra dia dingana tsotra sy tsotra, fa ho an'ny mpampiasa vaovao na tsy Ubuntu dia mety ho sarotra izany. Ankehitriny mba hankafizo ny kaonty Ubuntu One anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Ubuntu One
MarcoX dia hoy izy:
Mamaly an'i MarcoX
Hugo roman dia hoy izy:
tsy manaiky ny mailako. Tsy haiko ny mampiditra ny mailaka
Valiny tamin'i Hugo Roman
Izay solonanarana apetrako ao dia milaza amiko fa tsy solonanarana manan-kery izy io.
Tsy maka usernames izany! Nilaza izy fa tsy mety ireo ...